GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur American Sign Language Amharic Amis Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Edo Efik English Esan Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Ibinda Icelandic Idoma Igbo Igede Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
NA BAỊBỤL, e nwere ọtụtụ ihe ndị “nwere ụdị mmetụta anyị na-enwe” kwuru. (Jems 5:17) Dị ka ihe atụ, o nwere ike ịdịrị anyị mfe ịghọta otú ọ dị Pọl mgbe o kwuru ihe dị ná Ndị Rom 7:21-24. Ebe ahụ sịrị: “Mgbe m chọrọ ime ihe ziri ezi, ọ bụ ihe ọjọọ na-adị n’ebe m nọ. . . . Lee nhụsianya m nọ na ya!” Ọ bụrụ na anyị na ezughị okè alụwa, ihe a Pọl kwuru ga-akasi anyị obi n’ihi na o nwekwara mgbe ọ dị yanwa otú ahụ.
Pọl kwukwara ihe ndị ọzọ gosiri otú obi dị ya. Ná Ndị Galeshia 2:20, o kwuru na obi siri ya ike na Jizọs ‘hụrụ ya n’anya ma nyefee onwe ya maka ya.’ Obi siri Pọl ike na ihe a bụ eziokwu. Obi ò sikwara gịnwa ike na Kraịst nyefere onwe ya maka gị? O nwere ike ọ bụghị mgbe niile.
Ọ bụrụ na mmehie ndị anyị mere n’oge gara aga emee ka anyị na-eche na e nweghịzi uru anyị bara, o nwere ike ime ka o siere anyị ike ikweta na Jehova hụrụ anyị n’anya, nakwa na ọ gbagharala anyị mmehie anyị. O nwekwara ike ime ka o siere anyị ike ikweta na Jizọs nwụrụ maka anyị. Jizọs ọ̀ chọrọ ka o siere anyị ike ikweta na ọ nwụrụ maka anyị? Ọ bụrụ na Jizọs achọghị ya otú ahụ, gịnị ga-enyere anyị aka ikweta na ọ nwụrụ maka anyị? Ka anyị tụlee ajụjụ abụọ a.
OTÚ JIZỌS SI WERE ÀJÀ Ọ CHỤRỤ
Nke bụ́ eziokwu bụ na Jizọs chọrọ ka anyị kweta na ọ nwụrụ maka onye ọ bụla n’ime anyị. Olee otú anyị si mara? Weregodị ya na ị nọ mgbe ihe e dere na Luk 23:39-43 na-eme. E nwere otu nwoke a kpọgidere n’osisi n’akụkụ Jizọs. O kwetara na o mehiere. Ọ ga-abụrịrị na ihe o mere jọgburu onwe ya, n’ihi na ọ bụ ndị omekome mere ihe jọgburu onwe ya ka a na-esi otú a egbu. Ihe o mere na-enye ya nsogbu n’obi nke na ọ rịọrọ Jizọs, sị: “Cheta m mgbe ị banyere n’alaeze gị.”
Gịnị ka Jizọs mere? Chegodị ụdị ụfụ ọ fụrụ Jizọs mgbe ọ tụgharịrị olu ya lee nwoke ahụ. N’agbanyeghị na ọ nọ n’ihe mgbu, ọ mụmụụrụ nwoke ahụ ọnụ ọchị ma gwa ya, sị: “N’ezie, ana m asị gị taa, Mụ na gị ga-anọ na Paradaịs.” Ọ bụrụ na Jizọs chọrọ, ọ gaara agwa nwoke ahụ na ‘nwa nke mmadụ bịara, . . . ka o nye mkpụrụ obi ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta n’ọnọdụ ọtụtụ mmadụ.’ (Mat. 20:28) Ma, ị̀ chọpụtara na Jizọs medara obi gwa nwoke ahụ ihe mere ka o kweta na ọnwụ ọ na-aga ịnwụ ga-abara ya uru? Okwu bụ “mụ na gị” gosiri na Jizọs weere ya ka enyi ya. Jizọs mekwara ka ọ ghọta na ọ ga-ebi n’ụwa mgbe ọ ga-aghọ Paradaịs.
O doro anya na Jizọs chọrọ ka nwoke ahụ kweta na àjà o ji ndụ ya na-achụ ga-abara ya uru. Ọ bụrụ na Jizọs chọrọ ka onye omekome na-efeghị Chineke kweta na ọnwụ ya ga-abara ya uru, oleekwanụ maka Onye Kraịst na-efe Chineke e mere baptizim? Gịnị ga-enyere anyị aka ikweta n’eziokwu na Jizọs nwụrụ maka anyị n’agbanyeghị mmehie anyị mere n’oge gara aga?
IHE NYEERE PỌL AKA
Ọrụ ikwusa ozi ọma Jizọs nyere Pọl mere ka o kweta na Jizọs nwụrụ maka ya n’eziokwu. Gịnị mere anyị ji kwuo otú ahụ? O kwuru, sị: “Ana m ekele Kraịst Jizọs Onyenwe anyị, onye nyere m ike, n’ihi na ọ gụrụ m n’onye kwesịrị ntụkwasị obi site n’ikenye m ozi, ọ bụ ezie na n’oge gara aga, abụ m onye nkwulu na onye mkpagbu na onye na-akparị mmadụ.” (1 Tim. 1:12-14) Ọrụ a Jizọs nyere Pọl n’agbanyeghị ihe ọjọọ niile Pọl mere mere ka obi sie ya ike na Jizọs meere ya ebere, hụ ya n’anya ma tụkwasị ya obi. Jizọs nyekwara onye ọ bụla n’ime anyị ọrụ a. (Mat. 28:19, 20) Ọrụ a ọ̀ ga-emekwa ka obi sie anyị ike na Jizọs nwụrụ maka anyị?
E nwere otu nwanna aha ya bụ Albert. Ọ dịbeghị anya ọ lọghachiri n’ọgbakọ kemgbe ihe fọrọ obere ka o ruo iri afọ atọ na anọ a chụrụ ya n’ọgbakọ. O kwuru, sị: “Mmehie m dị n’ihu m mgbe niile. Ma, mgbe ọ bụla m nọ n’ozi ọma, ọ na-adị m otú ahụ ọ dị Pọl onyeozi. Ọ na-eme ka obi na-atọkwu m ụtọ, na-eme ka m na-echefutụ ihe ndị ahụ, na-emekwa ka m mata na ọdịnihu ga-aka mma.”—Ọma 51:3.
Mgbe ị na-akụziri ụdị mmadụ niile Baịbụl, mee ka ha mata na Jizọs hụrụ ha n’anya ma na-emetere ha ebere
Tupu otu nwanna aha ya bụ Allan aghọọ Onyeàmà Jehova, ọ na-emebu mpụ na ihe ike. O kwuru, sị: “M ka na-echeta ihe ọjọọ niile m mere ndị mmadụ. Mgbe ụfọdụ, ọ na-eme ka obi jọwa m ezigbo njọ. Ma, m na-ekele Jehova na o kwere ka onye mmehie dị ka m na-ezisara ndị mmadụ ozi ọma. M hụ ka ndị mmadụ na-ege ntị n’ozi ọma, ọ na-echetara m otú Jehova si hụ ndị mmadụ n’anya. Ahụla m na Jehova ji m na-enyere ndị na-ebi ụdị ndụ m biburu aka.”
Anyị nọrọ n’ozi ọma, anyị na-eme ihe ọma, na-echekwa echiche ọma. Ọ na-eme ka obi sie anyị ike na Jizọs na-emere anyị ebere, hụ anyị n’anya, tụkwasịkwa anyị obi.
JEHOVA KARỊRỊ ECHICHE ANYỊ
Tupu e bibie ụwa Ekwensu a, obi anyị ka nwere ike ịna-ama anyị ikpe n’ihi ihe ọjọọ ndị anyị mere n’oge gara aga. Gịnị ga-enyere anyị aka?
Obi otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Jean na-amakarị ya ikpe n’ihi ndụ ihu abụọ o biri n’oge ọ na-eto eto. O kwuru, sị: “Obi dị m ụtọ na ‘Chineke karịrị obi anyị.’ ” (1 Jọn 3:19, 20) Ịmata na Jehova na Jizọs ma na anyị bụ ndị mmehie kwesịkwara ime ka obi ruo anyị ala. Cheta na ihe mgbapụta ahụ abụghị maka ụmụ mmadụ zuru okè, kama, ọ bụ maka ndị mmehie chegharịrị echegharị.—1 Tim. 1:15.
Ọ bụrụ na i chee echiche banyere otú Jizọs si mesoo ụmụ mmadụ na-ezughị okè ihe, kpee ekpere maka ya, na-emekwa ike gị niile n’ozi ọma, ọ ga-eme ka obi sie gị ike na Jizọs nwụrụ maka gị. Ọ bụrụ na anyị ana-eme otú ahụ, anyị nwere ike ikwu ka Pọl, sị: Jizọs “hụrụ m n’anya ma nyefee onwe ya maka m.”